Hurumende Yokurudzira Chikafu Chinovaka Muviri
Nyanzvi munyaya dzechikafu chinovaka muviri dzinoti dziri kufara nedanho rakatorwa nehurumende rekuti zvinhu zvekudya zvakaita sehupfu nemafuta zviwedzerwe chikafu chinovaka muviri senzira yekurwisa dambudziko rekushaikwa kwechikafu chinovaka muviri.
Zvichitevera dambudziko rekushaikwa kwechikafu chinovaka muviri muvanhu vakawanda, bazi rezveutano rakaisa chiga chekuti kutanga musi wa 1 Chikunguru gore rino, vanogadzira zvekudya zvakaita sehupfu, mafuta ekubikisa, shuga neflour, vachange vachisungirwa kuwedzera zvinovaka muviri muchikafu ichi.
Nyanzvi munyaya dzechikafu chinovaka muviri, Muzvare Ollin Rukweza Chimhau, vanoti danho iri rakanaka chose mukurwisa dambudziko rekushaikwa kwekudya kwakakwana.
Mumwe chiremba musangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights , Dr Nicholas Wazadza, vanoti izvi zvichadzivirira zvirwere, kunyanya zvinobata vana vadiki nemadzimai.
Dr Wazadza vanoti chikafu chizhinji chiri kudyiwa munyika hachina kudya kunovaka muviri.
Kunyange hazvo vamwe vari kutyira kuti kuwedzerwa kwezvinovaka muviri uku kunogona kuzokanganisa hutano hwavo, Dr Wazadza vanoti vanhu havafanire kutyira hutano hwavo, sezvo zvose zviri kuitwa, zviri kuitwa nenzira dzakatambirwa nenyanzvi.
Mumwe mugari wemuHarare, VaAndrew Tsiga, vanoti nyaya yehurombo ndoinokonzera kuti mhuri zhinji dzinoshaya dziite dambudziko rekushaya kudya kwakakwana uku.
Mutemo wehurumende unoti ma Vitamin A achawedzerwa pamafuta neshuga kuitira kuti zvivake hutano hwakanaka hwevanhu. Muhupfu neflour muchawedzerwa neFolate, Zinc, Vitamin B6 neB12, iron nezvimwewo zvinobatsira mukuvaka hutano hwakanaka hwemuviri.
Gwaro reongororo yakaburitswa neZimbabwe Health Demographic Survey muna 2015 rinoti muZimbabwe pavana vari pasi pemakore mashanu, zvikamu zvevana ava makumi maviri nezvinomwe kubva muzana, havasi kuwana kudya kwakanaka, pamwe nekunovaka muviri yavo.